malunga — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Yakhiwe ndinokuqhayisa ikhona ukunxibelelana eqinileyo inyaniso yeBhayibhile ukuba nomfana, abaphulaphuli ezahlukahlukeneyo ngeendlela nezisebenzisayo nenamandla. Ekhokelwa Trip Lee, umbhali, utitshala, kwaye hip-hop igcisa, Yakhiwe ndinokuqhayisa ifuna ukuxhobisa kunye nokukhuthaza intshukumo kaKristu-abalandeli abo unashamed ukuqhayisa eNkosini wabo.
Trip Lee lilinge lombhali, utitshala, hip-hop igcisa, kunye nenkokeli ingcinga. Omnye umfundisi eAtlanta, yena ushumayela rhoqo kwaye ifundisa kwiinkomfa zamaKristu kunye neziganeko, kwaye wenza umculo wakhe amawaka abaphulaphuli ehlabathini lonke.
Kwincwadi yakhe yokuqala, Ubomi Good, Lee uveza afumane ubomi obugqithiseleyo ifumaneka kuphela kuKristu - ubomi ngaphaya nantoni ihlabathi inganikeza. incwadi yakhe yesibini, phakama, ubiza isizukulwana eziselula alinde ukulandela uThixo, kodwa ukuba sivuke uphile ngoku.
Njengegcisa hip-hop, umculo Lee uye wafumana lwanconywa njengowona, ngexesha yayifikelela abaphulaphuli abaninzi kunye nokukhula. Uyayazi uphumelele imbasa nkwe kwaye wonyulelwe Dove Awards ezininzi. albums bakhe emithathu edlulileyo debuted ngelo #1 ngeetshathi Billboard yeVangeli, kwaye icwecwe lakhe lwakutshanje, phakama, debuted ku #2 kwi Billboard Rap iitshathi #16 kwi Billboard 200.
umnqweno zinzulu Uhambo xa ubhala, ukufundisa, kwaye enza na ukuvakalisa ukulunga nozuko kaYesu Krestu.
Babhukishe Uhambo Lee ukufundisa, shumayela, okanye usebenze isiganeko yakho, zoqhagamshelwano WME.